फार्नबोरो । गत शनिबार मगर संघ युकेको त्रैमासिक बैठक बेलायतको फार्नबोरोस्थित मगर भवनमा सम्पन्न भएको छ ।
बैठकमा संघका कोषाध्यक्ष नेत्र आलेले कोषाध्यक्षको प्रतिबेदन पेस गरेका थिए भने महासचिव लाल पुनले मगर संघ युकेको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । बैठकमा शाखा समितिका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो शाखाको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । प्रतिवेदन दिने क्रममा मगरात संघर्ष समिति, अडिट समिति, हाउजिङ्ग समितिले आ–आफ्नो प्रतिवेदन तथा सुझावहरु पेस गरेका थिए भने विधान समितिका संयोजक ले. सुनिल रानाले विधानको ड्राप्mट संस्थाका अध्यक्ष नेम थापालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
डा. महावीर पुनद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नेपाललाई सहयोगार्थ च्यारिटी डिनरका प्रमुख संयोजक तथा मगर संघ युकेका उपाध्यक्ष सीता पुनले च्यारिटी डिनरको बारेमा समीक्षा गर्न उपस्थित सबैलाई अनुरोध गरेकी थिइन् । त्यस्तै, बैठकमा च्यारिटी डिनरको बारेमा व्यापक समीक्षा गरिएको थियो ।
बैठकमा संस्थाका अर्का महिला उपाध्यक्ष अनिता रानाले मगर दिवसको पूर्वतयारी तथा सम्भावित तयारीको बारेमा अवगत गराएकी थिइन् । मगर दिवसलाई कसरी व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उपस्थित महानुभावहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न तयारी रहेको जनाए ।
बैठकमा चन्दा संकलन, हरेक शाखाले मनाउने लागेको माघे संक्रान्ति र नेपाली ओपन कन्सर्ट तथा कलाकार छनोटकोे बारेमा व्यापक रुपमा छलफल भएको थियो । नेपाली ओपन कन्सर्टको लागि संघका उपाध्यक्ष बम सूर्यवंशीलाई प्रमुख संयोजकको जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।
मगर संघ युकेका अध्यक्ष नेम थापाले अध्यक्षता सम्पन्न बैठकलाई उपाध्यक्ष सीता पुनले स्वागत मन्तव्य राखेकी थिइन् भने महासचिव लाल पुनले सञ्चालन गरेका थिए ।